‘सिकलसेल एनिमिया’ परीक्षण गर्ने एउटै मेसिन तीन महिनादेखि बन्द, बिरामीलाई सास्ती – Health Post Nepal
‘सिकलसेल एनिमिया’ परीक्षण गर्ने एउटै मेसिन तीन महिनादेखि बन्द, बिरामीलाई सास्ती
२०७६ वैशाख ३० गते १०:१८
बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा ‘सिकलसेल एनिमिया’ रोग परिक्षण गर्ने एचबी ईलोक्ट्रोफोरेसिस मेशिन महिनादेखि बिग्रिएपछि परिक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । ठूलो संख्यामा बिरामी रहेको बाँके क्षेत्रमा रहेको एक मात्रै परीक्षण विकल्प मेशिन बनाउँनमा चासो नदिएको भन्दै नागरिक समाज बाँकेले मर्मतका लागि माग गरेको छ ।
दुई दिनअघि भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज पुगेका बाँकेका नागरिक समाजका अगुवाहरुले यथाशीघ्र सिकलसेल एनिमिया रोग परिक्षण गर्ने मेसिन मर्मत गर्न अस्पताल प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भेरी अस्पतालमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको परिक्षण गर्ने एचबीस् ईलोक्ट्रोफोरेसिस मेसिन ३ महिनादेखि बिग्रेको छ । जसका कारण बिरामी नियमित चेकजाँच गर्न पनि काठमाडौ धाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।
पश्चिम नेपालमै एक मात्र अस्पतालमा रहेको मेसिन बिग्रँदासमेत त्यसको मर्मतमा लापरवाही देखिएको आरोप नागरिक अगुवा एवं अधिवक्ता केवल सिहं थारुले बताए ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, लक्ष्मी तिवारी र अल्का मिश्रले सूचना मागेपछि सिकलसेल एनिमिया रोगको परिक्षण गर्ने एचबी ईलोक्ट्रोफोरेसिस मेशिन विगत ३ महिनादेखि बिग्रेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. रुपानन्द अधिकारीले सिकलसेल एनिमिया रोग परिक्षण गर्ने एचबी ईलोक्ट्रोफोरेसिस मेशिन मर्मतको लागि काठमाण्डौं लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मेसिनमर्मत गरी सञ्चालनमा नल्याउदा उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामी निराश भएर फर्किने गरेका छन । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. संकेत रिसालले फागुन महिनादेखि बिग्रेको मेसिन दक्ष इञ्जिनीयर अभावका कारण मर्मत हुन नसकेको बताए ।
अस्पतालको सामाजिक सेवा ईकाइबाट बाँकेमा हालसम्म ६६५ जना सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई विपन्न नागरिक उपचार निर्देिशका अनुसार एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइसकिएको डा. रिजालले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिक अगुवा
यसैबीच सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेले मेसिन बिग्रिनुको कारण र मर्मत वा नयाँ खरीद प्रक्रियाका बारेमा अस्पतालसँग सूचना माग गरेको छ । केन्द्रका कार्यक्रम व्यवस्थापक रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले आफूहरुले सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको सहज उपचारको व्यवस्थाका लागि बाँके र बर्दियाका अस्एपतालहरुमा पैरवी गरिरहेको बताए ।
पछिल्लो समयमा पश्चिम तराईमा जटिल रक्तअल्पता (सिकलसेल एनेमिया) का बिरामी बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ । पश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका थारु समुदायमा यो रोग भयावह रुपमा देखा परेको छ । यो तथ्यलाई मध्येनगर गरेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पनि अहिले बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा ३० हजार समुदायको रगत नमूना संकलन गरेर रोगको परीक्षण र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बाँके नेपालगञ्जमा मात्रै अहिलेसम्म करिब १ हजार भन्दा बढी सिकलसेलका बिरामी फेला परेको तथ्यांक छ ।
नेपालमा सन् २००३ मा एक÷दुई जनामा मात्र देखिएको रोगको परीक्षण हुन थालेपछि अस्वाभाविक रुपमा बिरामी संख्या बाहिर आएको हो ।नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा दैनिक सिकलसेलका करिब पाँचजना बिरामी आउने गरेको भेरी अञ्चल अस्पताल जनाएको छ ।